ကလေးယူချိန် ဘယ်လောက်ခြားသင့်လဲ? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် ကလေးယူချိန် ဘယ်လောက်ခြားသင့်လဲ?
အိမ်ထောင်သည်တွေ နဲ့ အတူနေချစ်သူရည်းစားတွေရဲ့ ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံးအရာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ မိသားစုစီမံကိန်းပါပဲ။
မိသားစုစီမံကိန်းဆိုတဲ့အထဲမှာ အချိန်မတိုင်ခင် မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန် ရမသွားစေဖို့ သားဆက်ခြားတယ်ဆိုတာအပြင် နောက်တစ်ခုကတော့ ရင်သွေးရှိပြီးသား အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက် အချိန်မတိုင်ခင် နောက် ကိုယ်ဝန် မရသွားဖို့ ကလေးယူတဲ့ ကာလ ခြားသင့်တယ်ဆိုတာလဲ အကျုံးဝင်ပါတယ်။
ကလေးယူချိန် ကာလ အကွာအဝေးကို သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ ပထမရင်သွေးရပြီးလို့ ၆လကနေ တစ်နှစ်အတွင်းကို ကာလ နီးကပ်တယ်လို့ မှတ်ယူလို့ရနိုင်ပြီး ၅ နှစ်နဲ့အထက်ဆိုရင် ကာလ ကြာတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကလေးယူချိန်ကာလ နီးကပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကွာတာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်မျိုးစလုံးမှာတော့ မိခင်နဲ့ မွေးလာမယ့် ရင်သွေး အပေါ် သက်ရောက်မယ့် ဆိုးကျိုး အနည်းနဲ့ အများရှိပါတယ်။ ဒီဆိုးကျိုးတွေကို ပြောပြပေးသွားရင်းနဲ့ ကလေးယူချိန် ဘယ်လောက်ခြားသင့်တယ်ဆိုတာကို သိလိုရာမေးက အကြံပြုဆွေးနွေးပေးသွားချင်ပါတယ်။
ကလေးယူချိန် နီးကပ်လွန်းတဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ…
(၁) ကိုယ်ဝန်လမစေ့ဘဲ မွေးတာ
(၂) ကလေးမမွေးဖွားခင် အချိန်မှာ သားအိမ်နံရံအတွင်းပိုင်းနဲ့ အချင်းတိုင် ကွာဟပြီး သားအိမ်တွင်း သွေးယိုတာ
(၃) မွေးလာတဲ့ ကလေးက ပေါင်မပြည့်၊ ကိုယ်လက် အင်္ဂါမစုံလင်တာ နဲ့ မွေးရာပါ ဉာဏ်ရည်မမှီခြင်း
(၄) သာမန်ကလေးထက် အော်တစ်ဇင် ဖြစ်နိုင်ခြေများတာ
(၅) မိခင်မှာလဲ ပထမကလေးမွေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်း ကျန်းကျန်းမာမာပြန်ဖြစ်ဖို့ အချိန်မယူလိုက်ရတဲ့အတွက် နို့မထွက်တာ မျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါသေးတယ်။
ကလေးယူချိန် ကွာဝေးသောအခါ ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ…
ကလေးယူချိန် ကွာဝေးတဲ့ အခါ ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အများကြီးတော့ မရှိပေမယ့် ပထမကလေးမွေးပြီး အချိန်အတော်ကြာမှ ကလေးယူတဲ့ အမျိုးသမီးတချို့မှာတော့ သွေးတိုး၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ နဲ့ သားအိမ် အနေအထားမမှန်ကန်တာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အပြင် သာမန်ကလေးတွေနဲ့ မတူဘဲ အချိန်ကွာခြားပြီးမှ မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေ အရွယ်ရောက်လာရင် အဝလွန်နှုန်း မြင့်မားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဖြင့်ရင် ကလေးယူချိန် ဘယ်လောက်ခြားတာ အသင့်တော်ဆုံးလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေ နဲ့ တခြား ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး ဆရာဝန်တွေကတော့ အနည်းဆုံး သက်တမ်း ၁၈ လကနေ ၂၄ အထိ ခြားသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးယူချိန်ကို အများဆုံး ၅ နှစ် မကြာသင့်ပါဘူး။ အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့ ကလေးယူချိန်ကို အနည်းဆုံး ၁ နှစ်တော့ ခြားပေးသင့်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်တွေရဲ့ ဘဝမှာ ကလေးယူတယ်ဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှသာ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ရင်သွေးရှိပြီးသား အိမ်ထောင်သည်တွေဆိုရင်လဲ ဒီလို ကလေးယူချိန် နီးကပ်တာတွေ ဝေးလွန်းတာတွေရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးကို သိထားမှသာ ကိုယ်ကျန်းမာတဲ့ မိခင်နဲ့ ကလေးဘဝကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။